Xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Garoowe oo la dhaariyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Garoowe oo la dhaariyay
August 28, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Garoowe ayaa la dhaariyay maanta oo Talaado ah, sida ilo-wareedyo ay sheegeen.
Ku dhawaad 18 xildhibaan oo kamid ah 27-ka golaha deegaanka magaalada ayaa la dhaariyay saakay oo Talaado ah, sida ilo-wareedyo ka ag-dhow doorashada ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Sagaalka xubnood oo kale ayaa la filayaa in la dhaariyo saacadaha soo socda, taasoo ka dhigaysa in doorshada duqa la qaban doono dhawaan.
Asbuucaan horaantiisa ayaa la filayay in la qabto doorshada duqa degmada, balse dib ayay u dhacday sababo la xiriira khilaaf ka dhex jiray xulista qaar katirsan xubnaha golaha deegaanka.
Inta badan xubnaha golaha deegaanku waa dhallinyaro ku cusub siyaasadda.
Dumarka ayaa ilaa saddex xubnood ka helay golaha deegaanka degmada Garoowe.
Tartamayaasha duqa degmada
Halkaan ka akhriso warbixin kooban oo ku saabsan musharixiinta: http://puntlandmirror.net/doorashada-duqa-garoowe-maxay-yihiin-musharixiinta-tartamaya/